Daawo 3 Nooc o Xaaskaga Biyaha Looga Keeno;Cirka Toogashada,Jilib joogsiga iyo Qaab Cusub - Hablaha Media Network
Daawo 3 Nooc o Xaaskaga Biyaha Looga Keeno;Cirka Toogashada,Jilib joogsiga iyo Qaab Cusub
HMN:- Rag abadn ayaa dhibaato weyn ku qabay qancinta dumarka iyagoo siyaabo farabadan iskugu daya in ay qofta qaboojiyaan balse kuwa badan ayaa ku fashilma guushaas ay raga badankii hamiyaan.
Gabdhaha is fareeyo oo digniin loo diray galmada riix halkan -&gt; http://www.iftineducation.com/2014/04/gabdhaha-is-fareeyo-oo-digniin-loo.html
Hadaba dhibaatada ugu weyne e raga qabsata waxa weeyey sida ay dumarka uga keeni lahaayeen biyo inta aysan iyagu biyobixin taas oo ah caqabad weyn.Raga inta badan howshooda iska wataan markay biyaha ka imaadaana way ka tagaan qofta iyadoow ali rafaneysa.
Daawo Video Cusub: Goobahan Hadii Aad Ka Marto Ninkaaga Xiliga Galmada Indhaha Ayuu Ka ILmeynayaa riix halkaan i-aad-ka.html
Dumarka soomalida yaa inta badan ka xishooda in xaaladaas oo kale raga u sheegaan in aysan iyagu wali helin biyaha taas oo ku kenta gabarta strees iyo mururgo badan iyo in ay ninka nacda.
Galmada Noocaan ah waxaa la sheegay in Uur lagu qaadi karo + Xeel-dheerayaal riix halkaan
Hadaba maanta waxaan idiin heynaa video sharaxaya qaabkaka ugu fudud ee biyaha looga keeno gabarta,Videoga wuxuu wataa sawiro nin iyo naag si toos ah isku tijaabinaya marka waxaan ka codsneynaa hadii aadan qaan gaar aheyn ama aadan xaas qabin in aadan daawanin.Hadii aad daawaneysa haku daawan meel caruur ama dumar joogaan.
HALKAN RIIX DAAWO 3 NOOC DUMARKA BIYAHA LOOGA KEENO